पशुपतिबाट फूलहरू चोरी भएपछि मान्छेलाई बाँदरसँग तुलना (भिडियो सामग्री) | Kendrabindu Nepal Online News
१० फाल्गुन २०७६, शनिबार १८:३८
काठमाडौं । महाशिवरात्रिका अवसरमा शुक्रबार पशुपतिनाथ मन्दिर पुग्ने दर्शनार्थीहरूले यस पटक भिन्न महशुस गरे । किनकी यस पटक पशुपतिनाथको मन्दिरलाई विशेषरूपले सजाइएको थियो ।
यस पटक मन्दिरलाई थरिथरिका बत्ती र सयौं प्रकारका फूलहरूले सजाइएको थियो । दिउँसो फूलहरूको कलात्मकताले लोभ्याएको थियो भने राति बत्तीहरूको कलात्मकताले लोभ्याएको थियो ।भारतको ग्लेज ट्रेडिङ इन्डिया प्रालिका निर्देशक सञ्जीव छिब्बर र चेतन हन्डाका निर्देशक केके शर्माले संयुक्तरुपमा करिव २ करोड रुपैयाँ खर्चेर पशुपतिनाथलाई मनमोहक बनाएका थिए । उनीहरूले पशुपति परिसर सिंगार्न भारतका साथै थाइल्याण्ड, अस्ट्रेलिया र कोरियाबाट समेत फूलहरू मगाएका थिए । सयपत्री, गुलाब, क्यामेसन, जरबरा, लिली, अलिको, कन्वारी, अर्किड, गोदावरी, एसिया टिक, देल्ही र जेप्सी लगायत विभिन्न जात र रङका फूल सजाउन करिव तीन सय जना कामदारले तीन दिनसम्म काम गरेका थिए ।
शुक्रबार महाशिवरात्रीको अवसरमा पशुपतिनाथको मन्दिर पुगेकाहरूले यिनै कलात्मक फूलहरूसँग फोटोसेसन गरे । शुक्रबार तिनै फोटोहरू सामाजिक सञ्जालहरूमा छरपष्ट भए । तर आज शनिवार पशुपति क्षेत्रकै बेग्लै फोटोहरू भाइरलभइरहेका छन् । करोडौं खर्चेर सजाइएको पशुपति परिसर अहिले उजाड देखिन्छन् । किनकी ढकमक्क सजाइएका फूलहरू चोरिएका छन् ।
पशुपति क्षेत्र विकास कोषका सदस्य सचिव डा. प्रदीप ढकालले रातारात फूल चोरिएको देखेर अचम्म लागेको प्रतिक्रिया दिए । “बाँदर चढ्ने ठाउँको फूलहरू सुरक्षित छ, मान्छेले भेट्ने फूलहरू चोरिएका छन् ।” उनले भने ।
अहिले सामाजिक सञ्जालमा पशुपति परिसरको फूल चोर्नेहरूको तस्वीर मात्रै भाइरल भइरहेका छैनन् उनीहरूलाई बाँदरसँग तुलना गरेर टिप्पणी भइरहेका छन् । यसअघि चिनिया राष्टपति सि जिनफिङ आउँदा तीनकुनेमा राखिएको दुबो चोरिएको थियो ।
बाँदर हुन् कि मानिस ?
शिवरात्रिको लागि पशुपतिनाथलाई सजाईएका मनमोहक र कलात्मक फूलहरु रातारात गायब भएका छन् । करिव २ करोड रुपैंया लागतमा सजाइएको पूmलहरु चोरिएका छन् । अहिले सामाजिक सञ्जालमा पूmल चोर्नेहरुको तस्वीर भाइरल हुनुका साथै उनीहरुलाई बाँदरसँग तुलना गरेर टिप्पणी भइरहेका छन् ।
चोरी, पशुपति, फूल
Prevबढेकाे तरकारी मूल्यदेखि पशुपतिको फूल चोरीसम्म (भिडियोसहित)
एमसिसी पास गर्न अमेरिकाको दबाव (भिडियो सामग्री)Next